လုပ်ခသက်သာမှုကို စိတ်ဝင်စားသော်လည်း မြေဈေးနှုန်းကြီးမြင့်နေသည့် အတွက် ဂျပန်နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံတို့မှ ငါးဖမ်းပိုက် စက်ရုံတည်ဆောက်ရန် အဟန့်အတားဖြစ်နေ
မြန်မာနိုင်ငံ၏ အလုပ်သမား လုပ်ခလစာ သက်သာမှုကို စိတ်ဝင်စားမှု ရှိသော်လည်း မြေဈေးနှုန်းများ ကြီးမြင့်နေသည့်အတွက် ဂျပန်နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံတို့မှ ငါးဖမ်းပိုက်စက်ရုံ တည်ဆောက်ရန် စိတ်ဝင်စားမှုကို အဟန့်အတားများဖြစ်နေသည် ဟု မြန်မာနိုင်ငံငါးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်မှ
ရေခဲဟိုတယ်ကတော့ ဥရောပနဲ့ အမေရိကက အအေးဓာတ် လွန် နိုင်ငံများမှာ တော်တော်ပြုလုပ်နေကြပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် ပထမဆုံး စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာကတော့ ဆွီဒင်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်း Kiruna ရွာအနီးက Jukkasjarvi အမည်ရ ဟိုတယ်ဖြစ်ပါတယ်။
၁၉၉၈ ခုနှစ်က စတင်ဖွင့်လှစ်ပြီး တီထွင်ဖန်တီးပေးခဲ့သူကတော့ ဂျပန်နိုင်ငံမှ ရေခဲပန်းပုထု အနုပညာရှင်ရှင် တစ်ဦး ဖြစ်ပါ တယ်။ နှစ် စဉ် ဆောင်းရာသီရောက်တိုင်း ဆွီဒင်က ရေခဲပေါတဲ့ နေရာကိုလာ လို့ ရေခဲ ပန်းပုထုပါတယ်။ ပြခန်းတွေ ပြုလုပ် ပြသပါတယ်။ ၁၀၈၉
Posted by ရွှေနိုင်ငံ at 17:28 No comments:
စင်ကာပူနိုင်ငံနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ Myanmar B2B Management Magazine တို့ ပူးပေါင်း၍ ‘Shape The World’ conference’ 13 Myanmar အား ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ဇန်န၀ါရီလ ၈ရက်၊ နံနက် (၉)နာရီခွဲတွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ အခမ်းအနားတွင် ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ အောင်ထွန်းသက် စင်ကာပူနိုင်ငံ consulus မှ Chief Executive Officer Mr. Lawrence Chong နှင့် Senior Strategy Consultant Ms. Christina Tarigon တို့က စာတွေ့လက်တွေ့ ရှင်းလင်းဆွေးနွေးမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရ
အင်တာနက်အသုံးပြုရန်မလိုဘဲ Y-talk စနစ်ဖြင့်နိုင်ငံခြားသို့ဖုန်းခေါ်ဆိုနိုင်ပြီ
ရသော်လည်း ယနေ့မှစကာ Y-talk စနစ်ကိုအင်တာနက်မလိုပဲ အခြားနိုင်ငံများသို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ အင်တာနက် မလိုပဲ ပြည်ပသို့ဖုန်းခေါ်ဆိုရာတွင် အစပထမ၌ ဖုန်းနံပါတ် ၀၁-၄၄၅၅၅၅၅ ကိုခေါ်ဆိုရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ပြီးနောက်မိမိ၏ Topup(FEC) ငွေဖြည့်ကဒ် အကောင့်နံပါတ်ကိုရိုက်ထည့်လိုက်ပါက မိမိအကောင့်အတွင်းသို့ငွေဝင်သွားဖြစ်ကြောင်း Y-talk ကတ်အရောင်း
နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန် (၂၀) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ-အိန္ဒိယ ထိပ်သီးအစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ရန် အိန္ဒိယသမ္မတနို်င်ငံသို့ ထွက်ခွာ
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်သည် အိန္ဒိယသမ္မတနိုင်ငံ နယူးဒေလီမြို့တွင် ကျင်းပမည့် (၂၀) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ-အိန္ဒိယ ထိပ်သီး အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ရန်အတွက် ယနေ့နံနက် (၁၀) နာရီတွင် အထူး လေယာဉ်ဖြင့် နေပြည်တော်မှ အိန္ဒိယသမ္မတ နိုင်ငံသို့ ထွက်ခွာ
ပိတောက်ပင် ရေနံမှော် လက်ယက်တွင်းတိမ် လုပ်ကွက် အသစ်မှ စီးပွားဖြစ် ရေနံစိမ်းများ ထွက်ရှိနေ
မကွေးတိုင်း ဒေသကြီး သရက်ခရိုင် သရက်မြို့ ပိတောက်ပင် ကျေးရွာ အနီးရှိ ပိတောက်ပင် ရေနံမှော် ရေနံလက်ယက်တွင်းတိမ်များ ရှာဖွေ တူးဖော် ထုတ်လုပ်ခွင့်ရ ရွှေရာသီ ကုမ္ပဏီလုပ်ကွက် ပိတောက် ပင် ကျေးရွာတောင်ဘက် ES လုပ်ကွက်အသစ် အတွင်းမှရေနံစိမ်းများ စီးပွားဖြစ် ထွက်ရှိနေရာ ရေနံတူး လုပ်ငန်းရှင်များ ဝင်ရောက်
နေပြည်တော်ရှိလွှတ်တော်အမတ်များအား လားရှိုးသိန်းအောင် ဂုဏ်ပြုဖျော်ဖြေလိုဟုဆို
နေပြည်တော်ရှိလွှတ်တော် အမတ်များအား လားရှိုးသိန်းအောင် ဂုဏ်ပြုဖျော်ဖြေ လိုကြောင်း ယနေ့ပြုလုပ်သော သတင်းစာရှင်းလင်း
ရဲရင့်တဲ့မိခင်အေမန်ဒါ ( မိဘကျေးဇူးကိုမမေ့ကြပါနဲ့ )
Santa Rosa De Temuco - နံနက်ခင်းတစ်ခုမှာ အိမ်တစ်အိမ်မှာ မီးလောင်နေပါတယ် ။ မီးသတ်သမားတွေ လာရောက်ငြှိမ်းသတ်နေ စဉ် မှာ အံ့သြဖွယ်ရာမယုံနိုင်ဖွယ်ရာအဖြစ်တွေကိုတွေ့ခဲ့ရတယ် ။ ကား ဗုံးပေါက် ကွဲမှုကြောင့်စဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဒီမီးလောင်မှုအတွင်းကို မိခင်ခွေး မကြီးက သူ့ကလေးတွေကိုကယ်ဖို့အတွက် အသက်စွန့်ပြီးပြေးဝင် သွားခဲ့တယ် ။အေမန်ဒါလို့ခေါ်တဲ့ဒီခွေးမကြီးဟာ တဟုန်ထိုး မီးလောင် အိမ်ထဲပြေးဝင်သွားပြီး မီးတောက်တွေကြားထဲမှာ သားငယ် ကိုရှာဖွေပါတယ် ။ ပူလောင်ပြင်းပြတဲ့ မီးတောက်တွေ ရဲ့ လောင်ကျွမ်း
မေ့ပျောက်ခံနေရသော ဂီရီ မုန်တိုင်းသင့် ပြည်သူများ အတွက် ရခိုင်လူ့အခွင့်အရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့မှ အစီရင်ခံစာ ထုတ်ပြန်
၂၀၁၀ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ကတိုက်ခတ်ခဲ့သော ဂီရိမုန်တိုင်းဒဏ်ခံ
ခဲ့ရသော ရခိုင် ဒေသခံပြည်သူများ၏ယနေ့အချိန်ထိ ကြုံတွေ့ နေ ရသော ပြဿာနာများနှင့် ပတ်သက်၍ ရခိုင်လူ့အခွင့်အရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့ (AHRDO) က အစီရင် ခံစာ တစ်စောင်ကို ယနေ့ ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
အဆိုပါ အစီရင်ခံစာကို “Voices from the Arakan State of Western Burma (Myanmar)” အမည်ဖြင့် အင်္ဂလိပ်ဘာ သာဖြင့်
ကမ္ဘာတစ်လွှား ထူးထူးဆန်းဆန်း ဥပဒေအချို့ 
- အိုဟီးအိုး (အမေရိကန်) တွင် လိုင်စင်မရှိပဲ ကြွက်သတ်ပါက ရာဇဝတ်မှု မြောက်သည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ တောင်ပိုင်း၌ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၅ သန်းခန့် တန်ဖိုးရှိ မူးယစ်ဆေးဝါးများ ဖမ်းဆီးရမိ
ထိုင်းအာဏာပိုင် များသည် နိုင်ငံတောင်ပိုင်းရှိ နရသီဝတ် ပြည်နယ်၌ ဒီဇင်ဘာ ၁၈ ရက်က အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၄ ဒသမ ၇ သန်းခန့်ရှိ မက်သာ ဖက်တမင်း ဆေးပြားများအား ဖမ်းဆီး ရမိခဲ့ကြောင်း နိုင်ငံပိုင်
မီဒီယာ တစ်ခုက ထုတ်ပြန် ကြေညာခဲ့သည်။
၎င်းဆေးပြားများအား ထိုင်းစစ်တပ်နှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့တို့က ပူးပေါင်း၍ စစ်ဆင်ရေးများ ပြုလုပ်ခဲ့ချိန်၌ ဆေးဝါးအမြောက်အမြားအား လာအိုနိုင်ငံမှ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ဖြတ်၍ မလေးရှား မူးယစ်ဆေးဝါး ကုန်သည်
တိုက်ခိုက်ရေး ရိုင်ဖယ်သေနတ်များ ပိတ်ပင်ရန် သမ္မတအိုဘားမား ထောက်ခံ
အမေရိကန်နိုင်ငံ ကွန်နက်တီကတ်ပြည်နယ် နယူးတောင်းမြို့၌ လူအစုအပြုံလိုက် သေနတ်ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက် အမေရိကန်သမ္မတ အိုဘားမားက တိုက်ခိုက်ရေးသေနတ်များ ပိတ်ပင် သွားရန် ထောက်ခံကြောင်း ပြောကြားလိုက်သည်။ သမ္မတအိုဘားမားအနေဖြင့် အဆိုပါကိစ္စကို လာမည့်
တောင်ကိုရီးယား နိုင်ငံတွင် ပထမဦးဆုံး အမျိုးသမီး သမ္မတ ပေါ်ထွက် လာဖွယ်ရှိ
တောင်ကိုရီးယား နိုင်ငံတွင် ပထမဆုံးသော အမျိုး သမီး နိုင်ငံ ခေါင်းဆောင်တစ်ဦး ပေါ်ထွက်လာနိုင်ဖွယ် ရှိသည့် သမိုင်း ဝင်မဲပေးပွဲကို ဒီဇင်ဘာ ၁၈ ရက်က စတင်ဖွင့်လှစ် လိုက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း
ပခုက္ကူမြို့နယ်အတွင်း ပထမဦးဆုံးအမျိုးသမီး ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတစ်ဦး ရွေးချယ်ခံရ
ပြုလုပ်လျှက်ရှိသော ရပ်ကျေးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရွေးချယ်ပွဲအချို့အနက် ပခုက္ကူမြို့နယ်အတွင်း ပထမဦးဆုံး
ဆီးရီးယား ပဋိပက္ခတွင် နေတိုး တပ်ဖွဲ့ကြားဝင်မည် မဟုတ်ဟု အာရပ် အဖွဲ့ချုပ် ပြောကြား
ဆီးရီးယား နိုင်ငံအတွင်း ဖြစ်ပွားလျက် ရှိသည့် ပဋိပက္ခများ အကြား နေတိုးတပ်ဖွဲ့က ဝင်ရောက်စွက်ဖက် နိုင်ဖွယ်ရှိသည် ဟူသော သတင်းများကို အာရပ်အဖွဲ့ချုပ်မှ လက်ထောက်အတွင်းရေးမှူးချုပ် အာမက်ဘန် ဟယ်လ်လီက ငြင်းဆိုခဲ့ကြောင်း MENA သတင်း ဌာနက
စီးပွားရေးမြို့တော် ရန်ကုန်တွင် ယာဉ်လိုင်းသစ် (၁ဝ)လိုင်း တိုးချဲ့ပြေးဆွဲ
မြန်မာ နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေး မြို့တော် ရန်ကုန်တွင် ၂ဝ၁၂ ခုနှစ်အတွင်း ယာဉ်လိုင်းသစ် (၁ဝ)လိုင်း တိုးချဲ့ ပြေးဆွဲခဲ့ကြောင်း မော်တော်ယာဉ် လုပ်ငန်းပေါင်းစုံ ထိန်းသိမ်းရေး ကြီးကြပ်မှု ကော်မတီ (ဗဟို)၏ စာရင်း များအရသိရသည်။တိုးချဲ့ခဲ့သော ယာဉ်လိုင်းများမှာ မော်တော်ယာဉ် လုပ်ငန်းပေါင်းစုံ ထိန်းသိမ်းရေး ကြီးကြပ်မှု ကော်မတီ (မြို့တွင်း)၌ ၅၇၊ ၃၁၊ ၃၆၊ ၄ဝ၊ ၄၃ နှင့် ၃၈ ယာဉ်လိုင်း ခြောက်လိုင်း၊ သန်မြန်သူ ယာဉ်လိုင်းမှ ၈၆ ယာဉ်လိုင်း၊မြောက်ပိုင်း ခရိုင်မှ ၁၂၄ ယာဉ်လိုင်း ၊ တောင်ပိုင်း ခရိုင်မှ ၂၅၈ ယာဉ်လိုင်း၊ အရှေ့ပိုင်း ခရိုင်မှ မေတ္တာလှိုင်း
ဒီနေ့မွန်းလွဲ၁၂နာရီ၁၅မိနစ်မှာ ကုန်ထုတ်ဓါတုဗေဒ မဟာတန်းကျောင်းသူလေး အသုဘမီးသဂြိင်္ုခါနီး မိခင်ဖြစ်သူမှနောက်ဆုံးအနေနှင့် နမ်းလိုက်စဉ်နှလုံး ခုန်သံ ကြားရ၍ ဆရာဝန်ပင့်စမ်းသပ်ရာ အသက်ရှင်နေကြောင်းသိရှိရ။ မိခင်ဖြစ် သူမှာ ဝမ်းသာလွန်း၍ထကသော်လည်း ရပ်ကွက်လူထုက မြို့နာမှာစိုးလို့ ဟုဆိုကာ မြို့ထဲသို့အဝင်မခံ၍ မိန်းကလေးခမျာ ကြူကြူပါအောင်ငိုပါတော့သည်။ အခြား အသုဘတစ်ခုလာပို့သူ
ပုံမှာ မြင်ရတဲ့ အတိုင်း ထိုင်းနိုင်ငံ မိုးလေဝသဌာနရဲ့ အချက် အလက်တွေအရ ဒီဇင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့မှာ နေပြည်တော်အနီး ဧလာမြို့ အရှေ့ဘက် ၇ မိုင်ခန့်နှင့် တောင်ငူမြို့ အနောက်ဘက် ၁၇ မိုင်ခန့် နေရာတွေမှာ ငလျင်ငယ် ၂ ကြိမ်လှုပ် သွားကြောင်း တွေ့ ရပါ တယ်။ စစ်ကိုင်း ပြတ်ရွေ့တစ်လျှောက် ငလျင်ငယ်များ လှုပ်ရှားမှု အကြိမ်ရေတစ်ရက်ခြားတစ်ကြိမ်လောက်အထိ စိပ်လာတဲ့အတွက်
တူရကီ ကမ္ဘာ့ လေ့လာ စောင့်ကြည့်ရေး ဂြိုဟ်တု တရုတ် အောင်မြင်စွာ လွှတ်တင်
တရုတ် နိုင်ငံသည် တူရကီ နိုင်ငံ၏ ကမ္ဘာ လေ့လာစောင့် ကြည့်ရေး ဂြိုဟ်တု တစ်စင်းကို ဒီဇင်ဘာ ၁၉ ရက် အစောပိုင်းက ကမ္ဘာပတ် လမ်းကြောင်းအတွင်းသို့ အောင်မြင်စွာ လွှတ်တင် နိုင် ခဲ့ကြောင်း နိုင်ငံ ပိုင် မီဒီယာ တစ်ခုက ထုတ်ပြန် ကြေညာ ထားသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်မြောက်ပိုင်း ကျူကွမ်ဂြိုဟ်တု လွှတ်တင်ရေး ဌာနမှ ထုတ်ပြန်ချက် အရ ၎င်းဂြိုဟ်တုကို ဒေသစံတော်ချိန် နံနက် ၁၂ နာရီ ၁၃ မိနစ်က လွှတ်တင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး ၎င်းဂြိုဟ်တုအား 2D. Long March့ ဒုံးပျံဖြင့် ကမ္ဘာ့ပတ်လမ်းကြောင်း အတွင်းသို့ ပို့လွှတ်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ခရစ်ယန်ဘာသာဝင်အဖြစ်ပြောဆို စည်းရုံးမှုများပြုလုပ်
နာဂ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ လဟယ်မြို့နယ်တွင် မြို့နယ် NLD ပါတီဥက္ကဌ ဦးလော်ယုံမှ မြို့နယ်အတွင်း ပါတီစည်းရုံးမှုများ ဆောင်ရွက်
ရာတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ခရစ်ယန်ဘာသာဝင် အဖြစ်ပြော ဆို စည်းရုံးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါသည်။ ဦးလော်ယုံမှ “NLD ဗဟို ဥက္ကဌ ဒေါ်စုသည် ဗြိတိသျှနိုင်ငံသားနှင့် အိမ်ထောင်ပြု ထားသဖြင့် ခရစ်ယန်ဘာသာကို ကိုးကွယ်သူ ဖြစ်ကြောင်း၊ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲတွင် NLD ပါတီအနိုင်ရပါက ခရစ်ယန်ဘာသာဝင်များ၏ လိုအပ်ချက်များကို
မိမိအသည်းတစ်ဝက်ကို သမီးငယ်အား လှူဒါန်းသည့် မိခင်
Imogen ဆိုတဲ့ ကလေးငယ်ဟာ အသက်ကိုးပတ် အရွယ်ခန့်မှစပြီး Biliary Atresia ရောဂါရှိတယ်လို့ သတ်မှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။
သည်းခြွေပန်မပါဘဲ မွေးလာတဲ့ ကလေးဖြစ်ပြီး အစာထဲမှအဆီကို ဖြိုခွဲဖို့ မဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေပါ။ ဒါကြောင့် အသည်းက အလုပ် အလွန် လုပ်ရပြီး အသည်းမှာ သည်းခြေရည်တွေ စုဆောင်းမှု ရှိနေကာ သေ ဆုံးနိုင်တာကြောင့် အသည်းအစားထိုး ကုသမှုခံယူဖို့ ငါးလ ခန့် စောင့် ဆိုင်းနေစဉ်အတွင်း အသက်ကယ်ဖို့ အရေးပေါ် အခြေအနေ ဖြစ်လာတဲ့အတွက် မိခင်ဖြစ်သူက သူမရဲ့
မကွေးတိုင်း ဒေသကြီး သရက်ခရိုင် သရက်မြို့ ပိတောက်ပင် ကျေးရွာ အနီးရှိ ပိတောက်ပင် ရေနံမှော် ရေနံလက်ယက်တွင်းတိမ်များ ရှာဖွေ တူးဖော်ထုတ်လုပ်ခွင့်ရ ရွှေရာသီ ကုမ္ပဏီလုပ်ကွက် ပိတောက် ပင် ကျေးရွာတောင်ဘက် ES လုပ်ကွက် အသစ် အတွင်းမှရေနံစိမ်းများ စီးပွားဖြစ် ထွက်ရှိနေရာ ရေနံတူး လုပ်ငန်းရှင်များ ဝင်ရောက်
လေဆိပ်နှင့် ရန်ကုန်စာတိုက်ကြီးတို့၌ ပြည်ပမှဝင်ရောက်လာသော စာအုပ်စာစောင်များအားအဖွဲများဖြင့် စစ်ဆေးခြင်းကို ဆောင်ရွက်တော့မည်မဟုတ်
လေဆိပ်နှင့် ရန်ကုန်စာတိုက်ကြီးတို့၌ ပြည်ပမှဝင်ရောက်လာသော စာအုပ်စာစောင်များအား စာပေစိစစ်ရေးနှင့် မှတ်ပုံတင်ဌာန၊ အခြား
သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့များက စစ်ဆေးခြင်းကို ဆက်လက်ဆောင်
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကို အားပေးတဲ့အနေနဲ့ အမေရိ ကန်ပြည်ထောင်စု က မြန်မာ တပ်မတော်နဲ့စစ်ရေး ဆက်ဆံ မှုတွေကို မကြာခင် စတင်တော့မယ့်လုိ့ မနေ့က ပြောဆိုလိုက်ပါ တယ်။ ပင်တဂွန် အမေရိကန်စစ်ဌာနချုပ် ထိပ်ပိုင်းအရာရှိတစ်ဦးရဲ့ ဗုဒ္ဒဟူးနေ့ ပြော ကြားချက် အရဆိုရင် မြန်မာ့ တပ်မတော်ကအရာရှိတွေကို လူသား ချင်း စာနှာမှုဆိုင်ရာ ကယ်ဆယ်ကူညီရေး၊ ခုခံကာကွယ်ရေး ဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်း လဲမှုနဲ့ စစ်ဖက်ဆိုင်ရာ ဆေးဝါးကုသရေး
ABSDF (မြောက်ပိုင်း)အဖွဲ့၏ ကချင်စစ်မြေပြင် ၀ါဒဖြန့်ချိရေး ရုပ်သံဖိုင်များ အင်တာနက်ပေါ်တွင် ပျံ့နှံ့
မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး ABSDF (မြောက်ပိုင်း)အဖွဲ့၏ ကချင်စစ်မြေပြင် ၀ါဒဖြန့်ချိရေး ရုပ်သံဖိုင်များ အင်တာနက်ပေါ်တွင် ပျံ့နှံ့လျက်ရှိသည်။ www.facebook .com/ lachid.kachin နှင့် www.facebook.com/jinghpaw. kasa များမှ တစ်ဆင့် ပျံ့နှံ့နေခြင်းဖြစ်သည်။
ဒီဇင်ဘာလ ၁၄ ရက်နေ့က KIA ဌာနချုပ်နှင့် ခုနစ်မိုင်အကွာတွင်ရှိသော လဂျားယန် (Laja Yang) ၌ ဖြစ်ပွားခဲ့သောKIA ၊ ABSDF (မြောက်ပိုင်း) ပူးပေါင်းတပ်နှင့် တပ်မတော်တို့တိုက်ပွဲတွင် အရှင်ဖမ်းမိခဲ့သော တပ်မတော်သား(သုံ့ပန်း)အချို့ကို စစ်ချက်ယူခြင်း၊ မေးမြန်းခြင်း ရုပ်သံဖိုင်နှင့် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှု
ကင်ဆာ ရောဂါကို စောစီးစွာ ရှာဖွေနိုင်သည့် အာရုံခံ ကိရိယာ သြစတြေးလျတွင် ထုတ်လုပ်
သြစတြေးလျ နိုင်ငံမှ သုတေသနပညာရှင်များသည် ကင်ဆာ ရောဂါ ကို ဆောလျင်စွာရှာဖွေ ဖော်ထုတ်ရာတွင် များစွာအကူအညီ ပေးနိုင် သည့် နောက်ဆုံးပေါ် အာရုံခံကိရိယာတစ်မျိုးကို တီထွင်ထုတ်လုပ် လျက်ရှိကြောင်း အင်တာနက်သတင်း တစ်ရပ်အရသိရသည်။
အဆိုပါ အာရုံခံကိရိယာသစ်ကို ဆွင်းဘမ်းန်နည်းပညာ တက္ကသိုလ်မှ ပါရဂူဘွဲ့ရ သုတေသနပညာရှင် အန်မာကာလန်းဒ်က တီထွင်ရန်
ထိုင်းနိုင်ငံရောက် မြန်မာ ရွှေ့ပြောင်း လုပ်သားများ ယာယီနိုင်ငံ ကူးလက်မှတ် ထုတ်ပေးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ သက်တမ်း ၃ လ၊ လိုအပ်ပါက ဆက်လက် တိုးပေးရန် ဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ရောက်ရှိအလုပ်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသော မြန်မာရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားများအား
ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာ နယ်နမိတ် အတွင်းရှိ ၁၉ မြို့နယ် တွင် သန့်ရှင်းရေး ဆောင်ရွက်ခ နှုန်းထားများကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ မှစတင်ကာ ယခင် ကောက်ခံသည့် နှုန်းထက် ကျပ် ၄၅၀ တိုးမြှင့်ကောက်ခံမည်ဟု ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင် သာယာရေး ကော် မတီ (Y.C.D.C) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး နှင့် သန့်ရှင်းရေး ဌာန ဌာနမှူး ဦးသန်းလွင်ဦး က အသိပေး ပြောကြားသည်။ မြို့တွင်း မြို့နယ်များ ဖြစ်သည့် ကျောက်တံတား မြို့နယ်၊ ပန်းပဲတန်း မြို့နယ်၊ လမ်းမတော် မြို့နယ်၊ လသာ မြို့နယ်၊ ဗိုလ်တထောင် မြို့နယ်၊
လုံခြုံရေးကြောင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှသို့ မပို့နိုင်သော်လည်း ၀ါးဈေးဆက်ကျဖွယ်မရှိ
ရခိုင်ဒေသမှထွက်ရှိသော ၀ါးများကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှသို့ တင်ပို့နိုင်ခြင်း မရှိသည့်အတွက် ဈေးနှုန်းများ ကျဆင်းနေကြောင်း စစ်တွေနယ်စပ် အခြေစိုက်ဝါးကုန်သည်များထံမှ သိရသည်။ ပြီးခဲ့သည့် ဇွန်လမတိုင်မီက အိမ်သုံးဝါးလုံးရေ ဆိုဒ်ကြီးတစ်ရာလျှင် (၂၄၀၀၀)ကျပ်၊ အသေး (၁၇၀၀၀) ကျပ် ဈေးရှိခဲ့ရာမှ ၀ါးဈေးနှုန်းများမှာ တဖြည်းဖြည်း ကျဆင်း လာရာ ယခုလက်ရှိ အခြေအနေတွင် အကြီးဆိုဒ်ဝါးလုံးရေ တစ်ရာ (၁၈၀၀၀)ကျပ်နှင့် အသေး(၁၃၀၀၀)ကျပ်ဈေးအထိ ကျ
စစ်တွေတွင် တည်ဆောက်နေသော ကုလားတန်ရေနက် ဆိပ်ကမ်း စီမံကိန်းအတွက် မြစ်ကြောင်း တူးဖော်ခြင်း လုပ်ငန်းများကို စတင်ဆောင်ရွက်နေ ပြီဖြစ်သည်။ ကုလားတန်စီမံကိန်း စစ်တွေရေနက် ဆိပ်ကမ်းတွင် ပင်လယ်ကူး သင်္ဘောများ သွားလာနိုင်ရန် အတွက်မြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းခြင်း ၊သောင်တူးခြင်း လုပ်ငန်းများအား
(၁၇-၁၂-၂ဝ၁၂) ရက်နေ့ နံနက် ၅ နာရီတွင် ရတနာတွင်း တူးစင်ရှိ ဓာတ်ငွေ့ ပို့လွှတ်မှုဆိုင်ရာ လျှပ်စစ်ထိန်းချုပ်စနစ် ချွတ်ယွင်းသည့် အတွက် ပြည်တွင်းသို့ ကမ်းလွန် သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့ ပို့လွှတ်မှု ခေတ္တ ရပ်ဆိုင်း ခဲ့ရသည်။
ယင်းသို့ ရပ်ဆိုင်းခဲ့ရသည့်အတွက် မြန်မာ့ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ လုပ်ငန်းမှ ချွတ်ယွင်းမှုများအား အမြန်ပြုပြင် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပြီး ပြုပြင်ဆောင်ရွက်မှုများ မပြီးစီးမီ ကာလအတွင်း ရန်ကုန် တိုင်း ဒေသကြီးရှိ ဓာတ်အားပေးစက် ရုံများနှင့် ရွှေတောင်၊ မြန်အောင်ရှိ ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများ ရပ်တန့်ရသည့်အတွက် ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်မှု (၃၁ဝ) မဂ္ဂါဝပ်ခန့် လျော့နည်း
ကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံး ကာတာနိုင်ငံက လူတွေက ကမ္ဘာ့အပျော်ရွင်ဆုံး လူသားတွေ မဟုတ်သလို ကမ္ဘာ့ အကျန်းမာဆုံး အသက်အရှည်ဆုံး ဂျပန်လူမျိုးတွေလည်း မဟုတ်ကြပါဘူး။ အဲဒီလိုပဲ ပညာတတ်အများဆုံး
ဆိုင်ကယ်မြို့တော် မန္တလေး နဲ့ ထိခိုက်သေဆုံးမှု
စက်ဘီးမြို့တော် မန္တလေးက ဆိုင်ကယ်မြို့တော် ဖြစ်နေပါပြီ။ မန္တလေး အခြေစိုက် ရတနာပုံသတင်းစာမှာ မြို့တွင်း ၄ မြို့နယ်၊ မြို့ပြင် ၃ မြို့နယ် ယာဉ်အရေအတွက်နဲ့ ယာဉ်တိုက်မှု ကိန်း
အခြေခံ ဥပဒေကို ပြင်ဆင်ပေးရမည်
ရွှေည၀ါ ဆရာတော် ~
နိုင်ငံရေးဆိုတာ ရန်သူကို မိတ်ဆွေလုပ်တာပါ။ မတည့်တဲ့လူနဲ့ပေါင်းပြီး အကောင်းဆုံးကို ဖြစ်အောင်
ဂျွန်ကယ်ရီအား နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး အဖြစ် ခန့်အပ်ရေး အဆိုပြုရန် အိုဘားမား ဆုံးဖြတ်
သမ္မတ ဘားရတ်အိုဘားမားသည် ဆီးနိတ် လွှတ်တော်၏ ပြည်ပရေးရာ ဆက်ဆံရေး ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌနှင့် ၂ဝဝ၄ ခုနှစ် ဒီမိုကရက်သမ္မတလောင်း ဖြစ်သည့် ဂျွန်ကယ်ရီအား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟီလာရီကလင်တန်
ယူအေအီးနိုင်ငံ ဒူဘိုင်းရှိ Al Bidaa ဧရိယာတွင် အသက်(၂၈)နှစ်အရွယ် အီသီယိုးပီးယား နိုင်ငံသူ အိမ်ဖော်အမျိုးသမီးဟာ ၎င်း၏ လူမျိုးတူလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် အမျိုးသမီးအား ရန်ပွဲပြီးနောက် ကြိုတင်ကြံစည်
မြင့်တက်လာသည့် ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသည် ဦးရေနှင့် ပုဂံဒေသမှ စကားသံများ
ယခုအခါ ပွင့်လင်းရာသီ ရောက်လာပြီ ဖြစ်သဖြင့် နေပြည်တော်၊ ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ အင်းလေး၊ ပုဂံမြို့ များသို့ ကမ္ဘာ့လှည့် ခရီးသွား ဧည့်သည်များ တဖွဲဖွဲ ဝင်ရောက်လျက် ရှိသည်။ပုဂံမြို့တွင် နိုင်ငံခြား ခရီးသွား ဧည့်သည်များ ဝင်ရောက်မှု ယမန် နှစ်များထက် စံချိန် တင် မြင့်တက်လာခြင်းကြောင့် သက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေး တာဝန်ယူမှု အပိုင်းနှင့် ခရီးသွားဧည့်သည်များ ကြုံတွေ့ရမည့် အခက်အခဲ များ အတွက် လုံခြုံရေးစနစ်တကျ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ပြင်ဆင်ထားသင့်ပြီဟု ပုဂံရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှု
လုပ်ခသက်သာမှုကို စိတ်ဝင်စားသော်လည်း မြေဈေးနှုန်းကြီ...
အင်တာနက်အသုံးပြုရန်မလိုဘဲ Y-talk စနစ်ဖြင့်နိုင်ငြံ...
နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန် (၂၀) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ...
ပိတောက်ပင် ရေနံမှော် လက်ယက်တွင်းတိမ် လုပ်ကွက် အသစ်...
မေ့ပျောက်ခံနေရသော ဂီရီ မုန်တိုင်းသင့် ပြည်သူများ အ...
ထိုင်းနိုင်ငံ တောင်ပိုင်း၌ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၅ သန်းခန...
တိုက်ခိုက်ရေး ရိုင်ဖယ်သေနတ်များ ပိတ်ပင်ရန် သမ္မတအို...
တောင်ကိုရီးယား နိုင်ငံတွင် ပထမဦးဆုံး အမျိုးသမီး သမ...
ပခုက္ကူမြို့နယ်အတွင်း ပထမဦးဆုံးအမျိုးသမီး ရပ်ကွက်အ...
ဆီးရီးယား ပဋိပက္ခတွင် နေတိုး တပ်ဖွဲ့ကြားဝင်မည် မဟုတ...
ဒီနေ့မန္တလေး ကြာနီကန်သုဿန်မှာ ဖြစ်ပွါးတဲ့ထူးခြားတဲ့...
တူရကီ ကမ္ဘာ့ လေ့လာ စောင့်ကြည့်ရေး ဂြိုဟ်တု တရုတ် အေ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ခရစ်ယန်ဘာသာဝင်အဖြစ်ပြောဆို စ...
လေဆိပ်နှင့် ရန်ကုန်စာတိုက်ကြီးတို့၌ ပြည်ပမှဝင်ရောက...
ကင်ဆာ ရောဂါကို စောစီးစွာ ရှာဖွေနိုင်သည့် အာရုံခံ က...
ဂျွန်ကယ်ရီအား နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး အဖြစ် ခန့်အပ်...
အမျိုးသမီးအိမ်ထဲ ခိုးဝင်ပြီး မတော်တရော်ပြုခဲ့သူအား...